အော့ဈဘတျနဲ့အတူ စှနျ့စားကွညျ့ကွ – Play Maker Sports Journal
October 2, 2021 playmaker Predictions 0
စနညေ ဂြာမနျဘှနျဒကျဈလီဂါ ပှဲစဉျ-၇ ပှဲကွိုသုံးသပျခကျြ
ဒေါ့မှနျ နှငျ့ အော့ဈဘတျ (ည ၈း၀၀)(မျောကှနျး)
သူတို့ရဲ့ခံစဈကွောငျးကလညျးလုံခွုံနတေယျလို့ဆိုနိုငျတာကွောငျ့ဒေါ့မှနျတိုကျစဈအနနေဲ့ အိမျကှငျးဆိုပမေယျ့လညျးဂိုးရဖို့ ရုနျးကနျရပါလိမျ့မယျ။ဒေါ့မှနျနိုငျမယျဆိုရငျတောငျဂိုးပွတျဖို့မလှယျလို့ အော့ဈဘတျနဲ့အတူ စှနျ့စားကွညျ့ကွပါ။
စနေည ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ပွဲစဉ်-၇ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်
ဒေါ့မွန် နှင့် အော့စ်ဘတ် (ည ၈း၀၀)(မော်ကွန်း)
ဒေါ့မွန်ကွင်းမှာ ဒီနှစ်သင်းရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ၆ပွဲဆက်တိုက် နှစ်သင်းစလုံး ဂိုးတွေအပြန်အလှန် သွင်းယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အော့စ်ဘတ်ရဲ့ခြေစွမ်းကတော့ တိုက်စစ်အားကျဆင်းလွန်းပြီး ကစားကွက်တည်ငြိမ်ဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားနေရပုံမျိုးပါပဲ။
သူတို့ရဲ့ခံစစ်ကြောင်းကလည်း လုံခြုံနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်တာကြောင့် ဒေါ့မွန်တိုက်စစ်အနေနဲ့ အိမ်ကွင်းဆိုပေမယ့်လည်း ဂိုးရဖို့ ရုန်းကန်ရပါလိမ့်မယ်။ဒေါ့မွန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် ဂိုးပြတ်ဖို့မလွယ်လို့ အော့စ်ဘတ်နဲ့အတူ စွန့်စားကြည့်ကြပါ။
မနျယူရဲ့နညျးစနဈပိုငျး အပွောငျးအလဲပွုလုပျရနျ ဆိုးလျရှားကို ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒို ပွောကွားထား
ဖိအားတှကေနြတေဲ့ ဆိုးလျရှားကို ကယျတငျမှာ ရျောနယျဒိုလား? ဘရူနိုလား? မှတျတမျးအရ ကယျတငျရှငျအစဈက လငျဂတျဖွဈနေ